Babeke phansi amathuluzi abasebenzi bakwa-SABC ngenxa yeholo | News24
Babeke phansi amathuluzi abasebenzi bakwa-SABC ngenxa yeholo
Cape Town –Abasebenzi bomsakazeli womphakathi iSABC babeke phansi amathuluzi njengoba bangenele isiteleka bekhala ngamaholo.
Le nkampani iveze lokhu ngoMsombuluko ngemuva kokubhuntsha kwezingxoxo nezinynyana.
Ngempelasonto i-SABC ibe nezingxoxo nezinyunyana iBroadcasting, Electronic, Media and Allied Workers' Union (Bemawu), kanye ne-Communications Workers' Union (CWU) lapho bekudingidwa khona udaba lokukhushulwa kwamaholo.
OLUNYE UDABA: Amazwi enduduzo ngokudlula kobengumhlaziyi webhola kwa-SABC
“ISABC ifuna ukunikeza abasebenzi u-4.5% wezinyanga eziyisithupha zokugcina kulo nyaka kuze kube wukuthi ziyagoqwa izingxoxo bese imali yesivumelwano ikhokhwa ngokuhamba kwesikhathi, uma inkampani isimi kahle ngakwezezimali,”kusho okhulumela i-SABC uKaizer Kganyago.
UKganyago uqinisekise umphakathi ukuthi izosakazwa bukhoma inkomfa kazwelonke ye-ANC ezokuba ngoMgqobelo.
Uthi bazokulandela imigomo yokuthi abangasebenzanga ngeke bahole kulaba basebenzi abajoyine isiteleka.
Okhulumela inyunyana iBemawu uHannes du Buisson utshele abeNews24 ukuthi abasebenzi bafuna ukukhushulelwa amaholo ngo-6%.